Wholesale detergant homwe Mugadziri uye Mutengesi | Yingzhicai
Detergent pouches zviri nyore kwazvo kushandisa. Huwandu hwezvinhu zvinoshandiswa muhomwe hwakanyanya kushoma pane hwaishandiswa kupakatira masvikiro akadai semabhokisi uye makatoni. Homwe dzinogona kuve dzinoenderana maererano nechigadzirwa chavanofanirwa kubata. Kuti uwane pfungwa iri nani yezvakanaka zvekushandisa sipo pouchi uye zvimwe zvisiri zvekudya zvikwama, ngatinzwisise magadzirirwo acho.
Isu Tinogadzira yakasarudzika leakage proof sipo kurongedza zvinhu uye sipo yekuisa mabhegi. Maitiro ekupakata anogona kusiyanisa zvichibva pane zvaunoda zvekurongedza. Mafomu emabhegi anowanikwa ekushambidza mapacheji emabhokisi akasimuka, homwe dzepasi dzakatsetseka, homwe dzespout, piro dzehomwe nezvimwe zvakawanda. Kavha zvinhu zvinodzivirira sipo poda kubva kune hunyoro, guruva uye tsvina uye chengetedza hunhu hwavo kwenguva yakareba. Detergent inogona kuiswa mukati meSimuki Pouches, Zipper Pouches, Center Seal Pouches, Bottom Gusset Pouches, Spout Pouches.
Spouted detergant homwe inogona kushandiswa kwemaoko sanitizer, Yedu chigadzirwa chigadzirwa inosanganisira yakawanda yekuwachisa sipo yekuchengetedza homwe uye sipo yekuisa homwe.
Iyo yekuchenesa homwe homwe yakavimbika sekukodzera kwese fomu yekuchenesa. Homwe yekuchenesa haina kunetsekana nezve kutakurwa nekuchengetwa kwezvinhu zvakasiyana-siyana zvekushambidza. Musika wekuwachisa poda kurongedza wakagadzirwa kusvika padanho rakadai, kuti kuteura humbowo uye zvimiro zvakabudirira zvakasarudzika zvakakosha pakubata ziso revateereri vatengi. Iko musika maererano nekushambidza poda yakawedzera munguva yakapfuura uye dzakasiyana sipo poda inowanikwa kuti itarisire yakarongedzwa maitiro emunhu.
Mabagi ekuwachisa hupfu hwekuwachira anobatsira kurongedza mafomu esipo sipo sipo, upfu fomu sipo, mvura sipo uye zvimwe zvakawanda. Masaga emidziyo ndiyo inonyanyo kuzivikanwa sipo yekushambidza sezvavanomira vasina kuchengetwa pamasherufu vachipa kuratidzika kwakanyanya uye vanoshandisa-mushe.
Kambani shoma yekuwachisa poda inoshandisa simbi ine simbi uye aruminiyamu mapepa ane sipo mapakeji ayo anogona kuve nesarudzo yekutambanudza iyo nguva yekushandisa chaiko kwezvinhu. Iyo yekugezesa poda kurongedza mabhegi inoshandurwa nekushandisa yazvino rotogravure zano iyo inogonesa kupurinda mavara akasiyana. Aya mabhegi esipo anoshanda seyakabudirira kushambadzira chishandiso. Homwe yesipo ine inopenya, inopenya matte kupera. Homwe yekurongedza inopa vimbiso kune yakasviba poda kurwisa hunyoro, fume, guruva, ivhu, hwema, mweya uye mwenje nekuisa chisimbiso uye kurongedza hupfu muPacking Homwe.
Pane akachinjika akasiyana siyana anowanikwa mune ekugezesa mabhegi akadai seMisodzi notches, Degassing mavharuvhu, Euro slots kuti zvive nyore. Iwo makambani anogadzirawo eco-hushamwari sipo mabhegi sezvo inowanzo kuve inogadziriswa. Iyo yekuchenesa homwe homwe isherufu inoshamwaridzika uye nzvimbo iri nyore. Iyo zvakare inopa isina-isina kugoverwa sezvo iri leakage-proof. Homwe yesipo inochinja, inogara yakasimba uye inodhura.
Pashure: Chibereko chinonwa homwe
Zvadaro: homwe yechikafu chemwana